Okunye izinto zeFektri yase China - Abanye abavelisi bezinto eziphathekayo, abaxhasi
Ipropylene glycol diacetate (PGDA)
Igama leKhemikhali: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7 Ifomula yeMolekyuli: I-C7H12O4 Ubunzima beMolekyuli: Inkcazo yeNkangeleko ye-160: Cacisa ulwelo olungenambala olunobunzima beMolekyuli: 160 Ukucoceka%: ≥99 Indawo yokubilisa （101.3kPa）: 190 ℃ ± 3 Umxholo wamanzi%: ≤0.1 Inqaku lesibane cup ikomityi evulekileyo）: 95 value Ixabiso le-Acid mgKOH / g: ≤0.1 Isalathiso sokukhangela （20 ℃）: 1.4151 Ubuninzi bezihlobo （20 ℃ / 20 ℃）: 1.0561 Umbala （APHA）: ≤ Imveliso engama-20 yokuveliswa kweentambo zemveliso yamanzi, imveliso yokunyanga amanzi, ukucheba okubangelwa ngamanzi (Hydrophobic ...
I-ethylene glycol ye-butyl ether ephezulu (ETB)
Igama lemveliso: I-Ethylene glycol ye-butyl ether (ETB) ye-CAS No.: 7580-85-0 Ifomula yeMolekyuli: C6H14O2 Ubunzima beMolekyuli: 118.18 Iipropathi zomzimba kunye neekhemikhali I-Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB): Imichiza yemichiza yendalo, engenambala kwaye evulekileyo enokutsha ulwelo olunencindi yeminti. Isinyibilikisi kwizinyibilikisi ezininzi eziphilayo, inokunyibilika i-amino, i-nitro, i-alkyd, i-acrylic kunye nezinye ii-resins. Kumaqondo obushushu egumbi (25 ° C), inokungangxengwanga ngamanzi, ityhefu esezantsi, ukucaphuka okuphantsi. Ngenxa yayo ...
Isocyanate Crosslinker ethintelweyo KL-120
Igama leKhemikhali: Isocyanate Crosslinker evaliweyo Isalathiso sobuchwephesha: Inkangeleko yombala otyheli omdaka we-viscous Umxholo oqinileyo we-60% iipesenti% Umxholo we-NCO osebenzayo 11.5% I-NCO esebenzayo eyi-440 Viscosity 3000 ~ 4000 cp kwi-25 ensity Density 1.02-1.06Kg / L kwi-25 ℃ Ubushushu obungapheliyo I-110-120, ukusasazeka kunganyibilika kwizinyibilikisi eziqhelekileyo, kodwa kusasazeke kakuhle kwizambatho zamanzi. Ukusetyenziswa okucetywayo: Emva konyango lobushushu, ukukhawuleza kwefilimu yepeyinti kunokuphuculwa kakhulu ngokongeza kwi-au ...
Ihyper-Methylated Amino Resin DB303
Inkcazo yemveliso: Yinto enqamlezileyo yokuwela i-arhente kuluhlu olubanzi lwezinto zepolymeric, zombini i-organo enyibilikayo kunye namanzi. Izinto ze-polymeric kufuneka ziqulathe nokuba nehydroxyl, carboxyl okanye amide amaqela kwaye anokubandakanya ii-alkyds, ii-polyesters, i-acrylic, i-epoxy, i-urethane, kunye ne-cellulosics. Uphawu lweMveliso: Ukuqaqamba kwefilimu ebhetyebhetye Ukuphendula ngokukhawuleza ukunyanga okunyangaI-Solvent-free Ukuhambelana okubanzi kunye nokunyibilika Ukucaciswa kokuzinza okugqwesileyo: Kuqinile: ≥98% V ...
IGUNYA LOKUXHUMANISA OT75
Uhlobo lweMveliso: Anionic surfactant Sodium diisooctyl sulfonate Specification Inkangeleko: engenambala ekukhanyeni kolwelo olutyheli olutyhile elubala PH: 5.0-7.0 (1% isisombululo samanzi) Ukungena (S.25 ℃). ≤ 20 (0.1% isisombululo samanzi) Umxholo osebenzayo: 72% - 73% Umxholo oqinileyo (%): 74-76% CMC (%): Izicelo ze-0.09-0.13: I-OT 75 yindawo enamandla, yokumisa i-anionic ngokumanzisa okugqwesileyo, ukunyibilikisa kunye ne-emulsifying action kunye nesakhono sokunciphisa uxinzelelo lwangaphakathi. Njengoko arhente ukumanzisa, kunokuba u ...
Igama lemveliso CAS NO. Isicelo sokudibanisa iarhente yeHyper-Methylated Amino Resin DB303 - Ukugqitywa kwezithuthi, ukuPeyinta isikhongozeli, Ukugqitywa kwesinyithi ngokubanzi, Ukugqitywa kokuqina okuphezulu, Ukugqitywa kokuthwalwa kwamanzi, ukugqunywa kweCoil. I-Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Yomeleza ukunamathela kwe-lacquer kwiindawo ezahlukeneyo, ukuphucula ukuxhathisa kwamanzi, ukubola kweekhemikhali, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuxhathisa kobuso bendawo yepeyinti. .
Ipropylene Glycol Phenyl Ether (PPH)
Izithako: 3-Phenoxy-1-propanol Ifomula yeMolekyuli: C9H12O2 Ubunzima beMolekyuli: 152.19 CAS NO: 770-35-4 Isalathiso sobuchwephesha: Izinto zovavanyo Ibanga lemizi-mveliso Ukubonakala kokuKhanya kulwelo olutyheli% ≥90.0 PH 5.0-7.0 APHA -100 Sebenzisa: I-PPH lulwelo olunombala olungabonakaliyo nolunephunga elimnandi elimnandi. Yinto engeyiyo inetyhefu kwaye inobuhlobo kwindalo ukunciphisa ipeyinti ye-V ° C iyamangalisa. Njengoko coalescent kakuhle emulsion yamanzi kunye nokusasazwa ukutyabeka gloss kunye semi-gl ...
IPentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate
Igama leKhemikhali: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate Ifomula yeMolekyuli: C20H33N3O7 Ubunzima beMolekyuli: 427.49 I-CAS Inombolo: 57116-45-7 Isalathiso sobuchwephesha: Inkangeleko engenambala kulwelo olumthubi olungafihlisiyo Unyibilikiso lwamanzi aluhambelani ngokupheleleyo namanzi kwi-1: 1 ngaphandle kwesiqendu Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 Viscosity (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S Umxholo oqinileyo ≥99.0% i-amine yasimahla ≤0.01% Ixesha elinqamlezileyo li-4 ~ 6 h ukumelana nokukhuhla ...
Izithako: I-Ethylene glycol diacetate Ifomula yeMolekyuli: C6H10O4 Ubunzima beMolekyuli: 146.14 CAS NO.: 111-55-7 Isalathiso sobuchwephesha: Inkangeleko: Umxholo wolwelo ongenanto ongenanto:% 98% Ukufuma: ≤ 0.2% Umbala (Hazen): ≤ 15 Ubutyhefu: phantse engekho ityhefu, i-rattus norvegicus yomlomo ye-LD 50 = 12g / ubunzima beKg. Sebenzisa: Njengesinyibilikisi sokupeyinta, ukuncamathelisa kunye nemveliso yemivumbo yepeyinti. Ukuthatha indawo okanye ukubuyisela endaweni yeCycylohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE njlnjl., Kunye neempawu zokuphucula ukulinganisa, ukulungelelanisa ukomisa ...